Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ ọhụrụ Barbados » Ụgbọ elu KLM ọhụrụ si Amsterdam na Barbados
Airlines • Airport • Aviation • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ụgbọ elu KLM ọhụrụ si Amsterdam na Barbados.
KLM Royal Dutch Airlines bụ ụgbọ elu azụmaahịa mbụ rutere n'ọdụ ụgbọ elu Seawell na Barbados na Ọktọba 19, 1938.
Ụgbọ elu mbụ KLM Royal Dutch Airlines erelarị.
Minista njem na njem ụgbọ njem mba ụwa, Senator Hon. Lisa Cummins kọwara ọrụ KLM ọhụrụ dị ka nnukwu nkwalite maka njem nlegharị anya Barbados.
Ọrụ KLM ọhụrụ ga -enye ohere na njikọta enweghị nkebi na site na isi mba Europe na mpaghara dịka Netherlands, Belgium, France na Scandinavia, site na ọdụ ụgbọ elu Amsterdam Schiphol na Netherlands.
Ọnụ ụzọ ámá ọhụrụ nke Europe egosilarị nkwa maka Barbados ka Grantley Adams International Airport (BGI) na -akwado ịnata ọrụ ọhụrụ kpọmkwem site na ọdụ ụgbọ elu Amsterdam Schiphol (AMS) site na KLM Royal Dutch Airlines.
Ọnwa ole ka ekwusịrị ọrụ ọhụrụ ahụ, erela ụgbọ elu mbụ, nke edobere maka Ọktọba 16, 2021. Na mgbakwunye na nzaghachi pụrụ iche, ọ ga -abụ oge akụkọ ihe mere eme maka mba ahụ KLM Royal Dutch ụgbọ elus bụ ụgbọ elu azụmahịa mbụ rutere n'ọdụ ụgbọ elu Seawell n'ime Barbados na Ọktoba 19, 1938. Ugbu a, ka afọ 83 gachara, ọ na-eme akụkọ ihe mere eme ọzọ site na ụgbọ elu erere ere si Amsterdam gaa Barbados.
Minista njem na njem ụgbọ njem mba ụwa, Senator Hon. Lisa Cummins kọwara ya dịka nkwalite dị ukwuu maka njem nlegharị anya obodo. “Anyị na -atụ anya ịnabata KLM ọzọ, afọ iri abụọ ka e mesịrị, n'ọdụ ụgbọ mmiri anyị. Ka anyị na -elele ọnọdụ ụlọ ọrụ njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ, eziokwu ahụ bụ na n'etiti ọrịa a, ndị mmekọ anyị na -aga n'ihu na -egosipụta ntụkwasị obi dị otú ahụ na Barbados ika, na KLM ịtinye ihe dị ka oche 20,000 site na Europe ruo Barbados karịa ọnwa ise, na -enye obi ụtọ. Nke kachasị mkpa, ọ bụ ngosipụta nke ọrụ ndị otu njem nlegharị anya na -eje ozi Barbados na -eme ka anyị na -egosi mmechi nke nkwekọrịta maka ụgbọ elu ọhụrụ na ịgbasawanye wee gaa n'ihu na -eweghachi ngalaba anyị na ndụ n'ọnọdụ ndị a pụrụ iche. ”
"Ya mere, achọrọ m ịja mbọ nke ndị otu niile, ọkachasị ndị otu anyị nọ n'ụlọ ebe a na Ozi, GAIA, na ahịa ahịa anyị na mba ofesi na nke a, ọkachasị ndị otu Europe, bụ ndị gbalịsiri ike mee ka nke a bụrụ eziokwu." ọ sịrị.
Dị ka otu n'ime ụgbọ elu kacha agba ọsọ n'ụwa, na -arụ ọrụ n'okpuru aha mbụ ya ruo afọ 100, KLM bụ ụgbọ njem kacha ogologo na Europe, na-eje ozi 318 na mba 118 nwere ndị mmekọ koodu 80. Ọrụ KLM ọhụrụ ahụ ga -enye ohere na njikọta enweghị nkebi na site na isi mba Europe na mpaghara dịka Netherlands, Belgium, France na Scandinavia, site na ọdụ ụgbọ elu Amsterdam Schiphol na Netherlands.
Cummins gbakwụnyere "Mmepe a ga-akwalite mbọ Barbados iji weghachite nzọ ụkwụ ya na Europe na enwere m oke nganga na Barbados nwere ike ịnya isi na KLM na Lufthansa, ndị na-ebu ụgbọ mmiri Europe abụọ, ka anyị na-abịaru nso oyi 2021/2022. Anyị na -agba mbọ idobe ebumnuche a ka ọ gafee oge niile.
"N'ezie, anyị na -atụkwa anya na ọtụtụ ụmụ amaala Barbadian na Caribbean ga -achọ irite uru na njikọ ndị a dị mma na Europe site na Barbados ma anyị nwere olile anya na site n'inwe nnukwu agụụ, ndị na -anya ụgbọ elu ga -atụle ịgbatị oge a," Ihe anyị na ndị mmekọ anyị na -arụkọ ọrụ na -ahazi ntinye njem maka ndị njem na usoro azụmaahịa anyị iji nye mbupu ibu maka ngwongwo ọkachasị ngwaahịa na -emebi emebi. Nke a dị oke mkpa dị ka akụkụ nke Pọtụfoliyo ụgbọ njem mba ofesi na igodo mgbasawanye akụ na ụba anyị n'ime ahịa ọhụrụ site na iji mmekọrịta ikuku.
Ụgbọ elu ga-arụ ọrụ na-akwụsịghị akwụsị site na Amsterdam ruo Barbados, ụbọchị atọ n'izu Mọnde, Tọzdee na Satọdee na ụgbọ elu KLM nke oge a, Airbus A330-200 nwere oche 264 na klaasị atọ gụnyere azụmahịa. Ipu na Amsterdam na 12:25 pm CET wee rute na BGI 4:45 pm AST, ọrụ ahụ ga -arụ ọrụ ruo Machị 31st, 2022.